तरुण दलमा विवाद : कसले पहिला गर्‍यो कारबाही ? | Safal Khabar
आइतबार, २९ भदौ २०७६, ०९ : १०
काठमाडौं । कांग्रेसको दोश्रो चरणको जागरण अभियानका क्रममा प्रभावशाली मानिने युवा संगठन तरुण दलमा अध्यक्ष–महासचिवकै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवाद बढ्दै जादा दुवैले एकले अर्काेलाई संगठनबाट हटाईएको वक्तब्य समेत दिन भ्याएका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका अध्यक्ष जितजंग वस्नेत र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका महामन्त्री भूपेन्द्रबहादुर शाहीले एक अर्काेलाई नै संगठनबाट निकालेका छन् ।
कांग्रेसको यो संगठन यस्तो संगठन हो, जुन विगत झण्डै ३ वर्ष यता जम्मा चार जना मात्र पदाधिकारीले मात्र चलाउदै आएका छन् । त्यो पनि विवादै विवादका बीचमा ।
विद्यान अनुसार ९५ जना सम्मको केन्द्रीय समिति रहने प्रावधान तरुण दलमा छ । तर कांग्रेस नेतृत्वकै कारण तरुण दलले ४ जनाको मात्र पदाधिकारीमै झण्डै तीन वर्ष समय खर्चेको छ ।
त्यसमा पनि अध्यक्ष र महासचिवको यो लडाई छ । उपाध्यक्ष कृष्ण सिटौला पक्षका छन् । उनी अष्टेलियामा छन् । कोषाध्यक्ष अध्यक्ष वस्नेतलाई साथ दिदै आईरहेका छन् ।
वस्नेत र शाहीको विवादमा रोचक त यो छक की कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व कोही पनि बोलेका छैनन । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तरुण दलको विवादलाई पार्टीले नोटिसमा राखेको मात्र प्रतिक्रिया दिए । थप यस विषयमा अहिले नवोल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘अहिले तरुण दलको विवाद पार्टीको नोटिसमा छ । यस बारेमा अध्ययन गरेर पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ, अहिले यसमा धेरै नवोलौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
कसले पहिले गर्‍यो कारबाही ?
तरुण दलमा बस्नेत शाहीको विवाद माउ पार्टी कांग्रेसको जागरण अभियानसँग पनि जोडिएको छ । अध्यक्ष बस्नेतले पार्टीको अभियानलाई सफल बनाउन सक्रिय सहभागिता जनाउन जिल्ला कमिटिलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेपछि महासचिव शाहीले पनि छुट्टै सर्कुलर गरेका थिए । उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लाग्न आग्रह गर्दै जागरण अभियान नौटंकी भएको बताएका थिए ।
त्यसपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । त्यस अगाडी पनि सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी लगायत जिल्लाको नेतृत्वमा एउटा नेताले गरेको निर्णयमा अर्काे नेताले अटेरी गर्दै समानान्तर संगठनको अध्यास गरेका थिए । यसवाट पनि विवाद निम्तेको थियो ।
त्यसपछि जागरण अभियान जोडिन आईपुगेको हो । रोचक यो छ की शनिवार वस्नेत र शाही दुवैले एकले अर्काेलाई कारवाही गरे । पहिले बस्नेतले महासचिव शाहीलाई संगठनबाट निश्काशन गरेको वक्तब्य दिए ।
लगत्तै जवाफी काउन्टर शाहीले पनि दिए, वस्नेतलाई कारवाही गरिएको विषयमा । तर शाही र वस्नेत कसले कसलाई पहिला कारवाही गरे अहिले तरुण दल भित्र चर्चा हुन थालेको छ । दुवैले दिएको वक्तब्यको दर्ता चलानी नम्वरका आधारमा अहिले पहिले को कारवाहीमा परे भन्ने वहस हुन थालेको हो ।
वस्नेतले शाही कारवाहीको वक्तब्य दर्ता चलानी नम्वर १६४ राखेर वक्तब्य दिएका थिए । तर त्यसपछि वक्तब्य दिएका शाहीले भने बस्नेतको अगाडी १६० दर्ता चलानी राखेर वक्तब्य दिएका थिए ।
तरुणको विवादले कांग्रेसको जागरण अभियानलाई नै समेत प्रभावित पार्ने नेताहरुको भनाई छ ।